New Microsoft Surface is Awesome!! | My Burmese Blog
New Microsoft Surface is Awesome!!	On January 15, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	US မှာလုပ်နေတဲ့ CES 2011 ပွဲမှာ Surface version 2.0 ကို​ပြသွားတာပါ။ အရင် Surface version 1.0 (Code named Milan Tabletop) တုန်းကတော့ လူသိပ်စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ အရင်က ရိုးရိုးကွန်ပျူတာကို ပက်လက်လှန် လက်နဲ့ တို့သုံးတာလို့ပဲ ထင်ကြတာကိုး။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ ထူးခြားပါတယ် ကွျန်တော်လဲ CNet Video ကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်က Microsoft ပြတာဆိုပေမယ့် စက်က Samsung ထုတ် SUR40 လို့ခေါ်တာတွေ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ထဲမှာ နိုင်ငံ ၂၃ နိုင်ငံ ဖြန့်ဖို့လုပ်ထားတယ်ပြောပါတယ်။ Red Bull, Fuji Film, Sheraton Hotels စတာတွေကနေလဲ အမှာရထားတယ်ပြောပါတယ်။ စက်ကို AMD Athlon II X2 သုံးထားပြီး Dual-Core Processor 2.9GHz, AMD Radeon HD 6700M GPU Direct X 11 သုံးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ OS က 64bit version Windows7ပါတဲ့။ SDK for Surface 2.0 ကတော့ နှစ်ကုန်လောက်မှ ရမယ်ပြောပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ စားပွဲက အရင်ကလို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်မဟုတ်တော့ပဲ ၄ လက်မ အထူနဲ့ အောက်ဘက်က အပေါက်သက်သက်ပါ။ HD 1080p 16:9 အချိုးနဲ့ပါ။ ကြည့်ရတဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ စတိဘောမာ ကြီးက လက်တွေ့လုပ်ပြပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ PixelSense technology ပါပဲ။ စကရင်က multi-touch တင်မဟုတ်ပဲ စာရွက်တွေ နဲ့ အခြား ပစ္စည်းတွေ စားပွဲပေါ်တင်လိုက်တာအထိသိပါတယ်။ စာရွက်ပေါ်က စာကိုလဲ scan လုပ်သွားနိုင်တာကတော့ Screen နည်းပညာ အသစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ စျေးက US 7,600$ ပါတဲ့။ ဖဲဝိုင်း ဒိုင်ကိုင်ချင်သူများ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ စက်ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft, tech news	LeaveaReply Cancel reply